Liverpool Waa Inay Sidan Ku Samayso Messi, Haddii Kale Sidii Manchester United Ayay U Jabi Doontaa – Latest Sports News
Liverpool Waa Inay Sidan Ku Samayso Messi, Haddii Kale Sidii Manchester United Ayay U Jabi Doontaa
Liverpool ayaa caawa marti u noqonaysa Barcelona oo joogta hoygeeda ay kooxaha ku ciqaabto ee Camp Nou, waxaana hormood u noqon doona xiddiga Lionel Messi oo inta badan kulamadii bisha April ee horyaalka LaLiga nasasho kusoo qaatay, isagoo labadii usbuuc ee ugu dambeeyey midna gebi ahaanba maqnaa, midda kalena qaybtii dambe soo galay.
Xili ciyaareedkan socda, Lionel Messi waxa uu u dhaliyey Barcelona 46 gool oo dhamaan tartamada ah, ciyaartii Manchester United ay ku burburiyeenna waxa uu dhaliyey laba gool oo isagu uu kalidii kasoo shaqaystay, isla markaana lasoo jiidhay difaaca uu diyaarsaday Ole Gunnar Solskjaer.
Si Liverpool ay uga badbaaddo in Messi uu ku dhex burburiyo Camp Nou, waa inay raacdo talooyinka uu soo jeediyey halyeygii Everton ee Trevor Steven oo hore ugu sheegay Man United arrimo ay ku xakamayn karayso Messi laakiin ka dhego adaygtay.
Tababare Klopp ayaa shirkii jaraa’id ee uu kaga hadlayey kulankan, waxa uu ka sheegay inuu Barcelona oo dhan iska difaaci doono, isla markaana aanu Lionel Messi si gaar ah u calaamadsan doonin.
Laakiin hadalkan waxa kasoo horjeedsaday Steven oo aaminsan in tababaraha reer Germany ee Klopp ay tahay inuu hal ciyaartoy oo khadka dhexe ah u xilsaaro inuu gaadhka ka hayo Leo Messi oo uu waardiyeyaayo illaa dhamaadka.
“Inkasta oo ay mar hore qaateen La Liga, Barca maaha koox looga cabsanayo sidii ay ahaan jirtay. Laakiin dabcan, dhibaatadu waa inay haystaan Lionel Messi oo mar walba sidii looga baqi jiray uun looga baqayo.” Sidaas waxa yidhi Trevor Steven oo baal uga ciyaari jiray xulka qaranka England iyo kooxda Everton.
Steven waxa uu intaas kaddib tilmaamay qaabka ay tahay in Liverpool ay u qabato Messi iyo khaladkii ay Manchester United samaysay labadii kulan ee ay Barcelona la ciyaartay, waxaanu yidhi: “Si la mid ah tababareyaashii kale ee ka horreeyey isaga, Klopp waxa uu waqti badan ku bixin doonaa sidii uu u heli lahaa qorshe uu ku joojiyo ciyaarta Messi; waxa kale oo khatar ah ciyaartoygoodii hore Luis Suarez oo ah ciyaartoyga labaad ee kusoo xiga laacibka reer Argentine.
“Wax kasta oo ay Barca weerarka ka samayso waxay ka yimaaddaan Messi oo ah ciyaartoy aan la joojin karaynin marka uu helo meel bannaan. Wuu ku dhaawici doonaa haddii aanad siinin dareen gaar ah.
“Ka hor ciyaartii siddeed dhamaadka, waxaan qoray in Manchester United ay tahay in Scott McTominay ay u xilsaarto Messi oo uu u raaco meel kasta oo uu tago si uu u carqaladeeyo. May samaynin sidaas, waxaana lagu karbaashay 4-0 isku darka labadii kulan.
“Liverpool way ka xoog badan tahay United, laakiin Klopp waxa uu waajahayaa caqabad, waxaanu ku dhegsanaanayaa shaxdiisa 4-3-3 oo ah mid weerar ku sallaysan amaba fursad u abuuraysa Messi.
“Jordan Henderson iyo James Milner ayaa ku habboon inay shaqada qabtaan, inkasta oo aan ka door bidayo Georginio Wijnaldum in loo xilsaaro ilaalinta Messi oo caadiyan diilinta kasoo gala dhinaca midig.”